I-Casa del Sale - I-Airbnb
I-Casa del Sale
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguSilvio
Embindini weVenetian Pre-Alps, ejikelezwe ziinduli neentaba, iCasa del Sal yindlu yakudala yentsapho yasemaphandleni etyebileyo. Ukusuka apha uqala ngokuhamba ngeenyawo ezimnandi, iindlela zebhayisekile, ukuhamba okunzima, iindlela ezininzi zebhayisekile, ukutyibilika ekhephini, uphando lokufota, ukutyibilika ekhephini, ukutyelela izixeko zobugcisa, ukuphanda ukutya okuchanileyo kunye nokutya kwasekuhlaleni, kunye nokundwendwela kwilali yakudala, iWindmills, iLabioli, iAlpine Garden.
Le ndlu ibangelwe kukuvuselelwa okukuvumela ukuba uhlale ngqo kwiindawo ebezisele zisetyenzisiwe. Ngokuqinisekileyo, oku kuqinisekisa zonke izinto eziluncedo zale mihla: uza kumangaliswa yindlela esizame ngayo ukukhathalela ubomi bakho kule ndlu.
Igumbi eliseluphahleni labantwana, izinto eziyimfihlo zamagumbi okuphumla, ukufunda okanye ukujonga i-PC, likuvumela ukuba wonwabele le ndawo yosapho kuwo onke amaxesha onyaka nakwiimeko zemozulu.
Kufuphi nee-trattorias ezincinci zedolophana kuvumela ukonwabela ukutya okumnandi kwasekuhlaleni kunye ne-Asiago kuqinisekisa zonke iinkonzo zokhenketho lwesintu ngokusekelwe ekusebenziseni onke amanqanaba kunye nokulindelweyo.
iibhedi ezilala umntu omnye eziyi-2, imatrasi ebekwa phantsi eyi-1, Iibhedi ekuthiwa zii-hammock eziyi-2
3 iibhedi ezilala abantu ababini, imatrasi ebekwa phantsi eyi-1, \_u00A0Ibhedi yomntwana eyi-1, Ibhedi ekuthiwa yi-hammock eyi-1
I-Lusiana yindawo yokuyibona. Ummandla wayo uqala kwiimitha ezilikhulu ukusuka kwilali yayo ephantsi (Laverda) ukuya kweyona ndawo iphakamileyo (Monte Corno, malunga ne-1300 m).
Usenokothuswa lixabiso leedolophana/izinto ezingafaniyo ezenza lo masipala (sizibalile).
Iifeni zezimuncumuncu neefoto zineemigodi yazo ekhethekileyo onokuzibona.
Oku kunokuncedwa ngumntu endisebenzisana naye nomhlobo wam (Francesca).
Injongo yethu kukunika iindwendwe zethu ubuhle bokuvuselela izinto ezilondolozayo kwixesha elidlulileyo kodwa ezinazo zonke izixhobo zale mihla. Siyathemba ukuba indlu uza kuyifumana isamkela, isondele, inobubele ibe inika umdla. Kwakhona, ucela intlonipho nokuhoya izinto zakhe (iinkuni zakudala, imizobo kunye neefoto zentsapho), njl.
Uza kumangaliswa kukuthi cwaka okusenokusoloko kuphekwa.
Emva nje kokuba uphumile, uza kufumana ibala elincinci elineetafile apho ungonwabela ilanga (elidla ngokuthe ngcembe), uze ubuke indawo entle. Ngasemva kwegadi yethu yindawo entle, kunye neentyantyambo zayo, i-lavender, imifuno yokupheka, imithi yeziqhamo, kunye neenduli apho abanikazi bezindlu ziinkomo ngexesha lokufudumala.
ukusuka kwindlu ungaqala ukuhamba, uhamba ngeenyawo okanye ngezinye iindlela, ufumane yonke into abantu abanomdla abafuna ukonwabela umntu wasekuhlaleni.
Umbuki zindwendwe ngu- Silvio
Kwindawo entle neqengqileyo yaseVenetian kunye nomasipala wokuqala kwiiHighlands zaseAsia, iNdlu, ebizwa ngokuba yiCasa del Sal, yinxalenye yendlu eyimbali yentsapho etyebileyo yasefama (iPassuello), eyayikade ingabanikazi beendawo zokugcina imarble kunye nemfuyo yeegusha. I-La Casa del Sale ikwidolophana yaseVinarolo kwaye inokuqinisekisa ukuba inomgangatho ophezulu kunye nobuninzi bezinto abanokukhetha kuzo kwintsapho okanye iqela labahlobo abanomdla kunye nobuchule.
Kukho amathuba amaninzi kwidolophana yaseVinarolo:
• Kulula kakhulu ukuhambahamba nosapho ukuze utyelele ezinye iilali zaseLusiana (uhamba ngeenyawo usuka eNdlini);
•Ukutyelela kwi-Museo harduso dei Borghi di Lusiana,
• Ukhetho oluhle phakathi kokunyuka intaba okulula nokunzima ngakumbi kwiiHighlands,
• Indlu kaFiorita ingaba yindawo yokukhempisha yeendlela zemihla ngemihla kwizixeko ezintle zobugcisa ehlabathini (iTreviso, iVenice, iPadova, iVicenza, iVerona)
• Iindlela zebhayisekile zininzi ibe zinento yokwenza nobunzima.
• Ukutyibilika ekhephini kunye nokutyibilika ekhephini kumnandi kakhulu.
Indawo kunye neendawo ezijikelezileyo ziyavuyisa kwabo bathanda ukufota.
Kwindawo entle neqengqileyo yaseVenetian kunye nomasipala wokuqala kwiiHighlands zaseAsia, iNdlu, ebizwa ngokuba yiCasa del Sal, yinxalenye yendlu eyimbali yentsapho etyebileyo yas…